Labo ka mid ah dagaalamayaasha al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay magaalada Baydhabo… – Hagaag.com
Labo ka mid ah dagaalamayaasha al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay magaalada Baydhabo…
Posted on 15 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya in Ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen labo kamid ah dagaalamayaasha Shabaab.
Howlgalkan oo ay si gaar ah u fuliyeen Ciidamada Booliska iyo Nabad Sugida Baydhabo, ayaa waxa uu ka dhacay Xaafada Horseed ee magaalada Baydhabo, Ciidamada oo heystay tilmaanta ragan, ayaa u daatay guriga ay ku jireen raga la soo qabtay.
Majirin wax iska caabin ah oo ay sameeyeen raga katirsan Shabaab ee howlgalka lagu soo qabtay, Waxeyna sidoo kale Ciidamada gacanta ku soo dhigeen laba Bistoolo oo ay wateen raga la soo qabtay.
Taliyaha Ciidanka Booliska degmada Baydhabo oo lagu wareejiyay raga la soo qabtaty, waxa uu sheegay in howlgalkan ay kaalin ka qaateen Shacabka magaalada, Xabsiga magaalada ayuu sheegay in haatan lagu hayo.
Labada Shabaabka ah ee la soo qabtay, ayaa la sheegay iney wax ka ogaayeen qaraxyadii xooganaa ee gilgilay magaalada Baydhabo, waxaana soo baxaya warar sheegaya iney damacsanaayeen iney toogasho ka geystaan magaalada.
Si Kastaba, Ciidamada amaanka Baydhabo, ayaa feejignaan sare galay, waxeyna sameynayaan howlgalo xoogan, Iyadoo laga cabsi qabo in magaalada ay ka dhacaan weeraro kale, Inta lagu guda jiro diyaar garowga doorashada KGS.